भर्खरै आयो दुखद खबर : हेर्दाहेर्दै भिषण बाडीले नेपाली सेनाको ब्यारेक बगायो कयौ बेपत्ता खोजीकार्य जारी ! (हेर्नुहोस् भिडियो) – News543Online
भर्खरै आयो दुखद खबर : हेर्दाहेर्दै भिषण बाडीले नेपाली सेनाको ब्यारेक बगायो कयौ बेपत्ता खोजीकार्य जारी ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
June 16, 2021 adminLeaveaComment on भर्खरै आयो दुखद खबर : हेर्दाहेर्दै भिषण बाडीले नेपाली सेनाको ब्यारेक बगायो कयौ बेपत्ता खोजीकार्य जारी ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
मेलम्ची । अबिरल वर्षासँगै मेलम्ची नदीमा भिषण बाढी आएको छ । बाढीले नदी किनार आसपासमा रहेका घरहरु बगाएका छन् भने बाढीले कम्तीमा पनि ५ जना बेपत्ता र अन्य धेरै हताहत भएको स्थानीयले बताएका छन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
हेलम्बु गाउँपालिका १ नाकोते नजिकैबाट मंगलबार बेलुकी पहिरो गएको थियो । पहिरोले नदी थुनिएको र खोलाको वहाव समेत बढेपछि मेलम्चीमेलम्ची । अबिरल वर्षासँगै मेलम्ची नदीमा भिषण बाढी आएको छ ।
बाढीले नदी किनार आसपासमा रहेका घरहरु बगाएका छन् भने बाढीले कम्तीमा पनि ५ जना बेपत्ता र अन्य धेरै हताहत भएको स्थानीयले बताएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका १ नाकोते नजिकैबाट मंगलबार बेलुकी पहिरो गएको थियो ।
पहिरोले नदी थुनिएको र खोलाको वहाव समेत बढेपछि मेलम्ची खोला एक्कासी उर्लेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । रातीको समय भएकाले उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुग्न सकेका छैनन् ।
मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले नदी आसपासमा सञ्चालन गरेको ट्राउट माछा फर्म सबै बगाएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बु,चनौटे लगायतका बजारमा समेत बाढीले क्षती बनाएको छ । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला
भखर गयकाे पहिरोमा पुरिएर4नानीहरू काे ज्यान गयकाे छ हार्दिक शर्दान्जलि 😭😭😭😭😭😭😭😭ripलेखेर शेर गरिदिनुहाेला अात्मले शान्ति पाअाेस
omg पुन्य गौतमलाई खोलाले बगायो कहाँ पुरायो होला खोजी जारी छ
बलिउड अभिनेता सोनु सुदले पैसा नभएर उपचार गर्न नपाएका नेपालीको उपचारमा सहयोग गर्ने